Wararka Booqashada Caalamiga ah • Fursadaha maalgashi • kale • dib u dhiska safarka • Seychelles wararka safarka • Wararka safarka Switzerland • Wararka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka
Waxyaabihii Seychelles ayaa mar kale la keenay Switzerland!
Bogga ugu weyn » posts » kale » Waxyaabihii Seychelles ayaa mar kale la keenay Switzerland!
Laga bilaabo qoraal weyn, Jasiiradaha Seychelles waxay ku muujineysaa cajaa'ibyadooda Switzerland, maaddaama Guddiga Dalxiiska Seychelles (STB) ay olole xayeysiis ah oo laba toddobaad soconaya ka bilaabayaan waddammada Yurub - wejiga labaad ee ololaha xayeysiinta, oo bilaabmay Oktoobar 2020 suuqa.
Muuqaalka quruxda badan ee Seychelles waxaa lagu soo dhajiyay boorarka iyo boodhadh dhowr magaalo oo Switzerland ah iyadoo xusuusin joogto ah u ah booqdayaasha iman kara in Seychelles ay weli tahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu cibaado tago xilliga jiilaalka.
Ololaha, oo dhiirrigelintiisa ka qaadanaya ololaha dhijitaalka ah ee 'STB 2020' Khibrad u leh Seychelles, Gurigeenna Meeshaada quduuska ah ', ayaa laga bilaabay January 11, 2021, waana fursad aad u fiican meesha loo socdo si loogu soo dhawaado dadka Switzerland tiro badan oo sawiro neef-qaadasho ah oo qurux badan oo Seychelles ah.
Masawirada lagu dhajiyay saldhigyada tareenka ee guud ahaan Zurich, Bellinzone, Lugano iyo Lausanne oo ay kujiraan boqolaal boorar oo dheeri ah basaska iyo taraamyada magaalada Geneva, ololahan ayaa loogu talagalay in lagu gaaro ku dhowaad 4,336,000 qof asbuucii.
Isagoo ka hadlaya ololaha, Agaasimaha STB ee Switzerland Judeline Edmond waxay xustay in falanqaynta isbeddellada ka socda suuqa Switzerland ay muujineyso in rabitaanka safarada uusan saameyn aafada.
Waxay intaa sii raacisay dadaalka STB ee ah in la xoojiyo aragtida la doonayo ee suuqa iyo in la xoojiyo dadaalkeeda ku aaddan inay maanka ku hayso maskaxda martida.
Bilawga ololeyaasha tallaalka ee Switzerland iyo Seychelles, ololuhu wuxuu ku soo beegmayaa wakhti ku habboon iyadoo kalsoonida safarku ay bilaabmayso inay soo kordho booqdayaashuna waxay rajaynayaan meel ay uga baxaan oo qumman ka dib sugitaanka dheer ee guryahooda.
Markii aan bilownay mashruuca bishii Oktoobar ee sanadkii hore, waxaan u maleynay inay fiicnaan laheyd inaan kordhino bisha Janaayo sidoo kale aan sare u qaadno saameynteeda. Xilliyadii fasaxa ayaa lagu soo gabagabeeyey Switzerland qof walbana wuxuu ku soo laabtay howlihiisii ​​caadiga ahaa, markaa tani waa waqtigii ugu habboonaa ee lala xiriiri lahaa kuwa soo booqan kara isla markaana lagu riyoon lahaa iyadoo la tuso waxa ka maqan halka ay isku dayayaan in ay diirimaad qabow galaan , ”Ayey tiri Judeline Edmond, Agaasimaha STB ee Switzerland.
Switzerland waxay ka mid ahayd afarta suuq ee ugu sareysa Seychelles tan iyo markii dib loo furay garoonka diyaaradaha ee Seychelles August 1, 2020 oo ay la socdaan 1,929 rakaab ah dib-u-furitaanka illaa dhammaadka Diseembar 2020.
Seychelles sidoo kale waxay hadda ololeheeda hal sano ee taraamka ah ka waddaa magaalada Zurich iyada iyo Manta Reisen, oo bilaabmay bilowgii Sebtember 2020.
Hawlahan xayeysiinta ahi waxay taageeraan dadaallada kale ee dhiirrigelinta ah, ee ay STB ka waday suuqan si kor loogu qaado halka loo socdo.